Danjire Jama Aidid ayaa ugu baaqay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Turkey in ay ilaaliyaan shuruucda ay dowladdu dejisay isla markaana xilliyada bandowga ay ku nagadaan guryahooda. – Somali Embassy Ankara
Maaddaama bandowgii horey uga jirey dalkan Turkey laga khafiifiyey magaalooyinka qaarkood, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Istanbul, Ankara iyo kuwo kale oo jaaliyadda Soomaalidu deggantahay, qaarkoodna ganacsi ku haystaan Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan Turkey Mudane Jama Aidid ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkey ugu baaqay in ay ilaaliyaan qawaaniinta lagu xakamaynayo faafista cudurka COVID19.
Danjiruhu wuxuu si gaar ah bulshada kala dardaarmay Afxirashada, kala fogaanshaha iyo nadaafadda gacmaha markasta. Wuxuu kale oo uu si gaar ula dardaarmay goobaha ganacsiga gaar makhaayadaha in ay ilaaliyaan kala fogaanshaha u gaarka ah, oo ah in labadii kursi ee isku xigaba midi bannaanyahay oo ay ku dhejiyaan callaamadda lama fadhiisan karo. Makhaayadaha waxaa loo oggolyahay in ay isticmaalaan 50% kuraasta ay haystaan.
Sidoo kale danjiraha ayaa Soomaalida ugu baaqay in Sharciyadooda aysan guryaha ugu soo tegin maadama Laamaha Amniga ee dalkan ay wadaan baaritaanno.
Danjire Jama Aidid ayaa ugu dambayntii ugu baaqay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan deggan in xilliyada bandowga ay ku nagadaan guryahooda.